Allgedo.com » Waraysi
Home » Waraysi
Dolow, Somalia (AOL) – Diyaaradani ka bilowdey Duulimaadyada Caadiga ah ee Xaga Ganacsiga iyo Rakaabka dadka oo ka mid ah Shirkadaha Diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa dhowaan waxay Duulimaadyo ay ku tageyso Todobaadkiiba mar ay ka bilowdey Magaalooyinka Muqdisho iyo Dolow, iyadoo dadka ku dhaqan Gobolada Gedo iyo wadamada Deriska sida Ethiopia iyo Kenya. Shire Cabdi Xasan (Shire Coley)...
Waxaa Noo suurta gashay inaan wareysi ka qaadno Dr. Daahir Cabdulaahi Muumin oo ah aqoon yahan ku noolaa dalka Yemen mudo badan. Waraysigaas waxaa uu taabanaya arrimo badan oo xasaasi ah oo khuseeya Gobolada Jubooyinka iyo Gedo, waraysigiina waxa uu u dhacay sidatan:- Su’aal: Maxaad kala Socotaa sida uu u socdo dhismaha maamul Goboleedka Jubbaland ee uu hadda qorshihiisa socdo? Jawaab: Waxba...
Xoghayaha Guddiga Xiriirka iyo Dib u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka oo ka warbixiyay dilkii nabadoon Ismaacil Qalinle (Dhageyso wareysi)
Kaddib markii maalinimadii Qamiistii shalay ay kooxo hubeysan si xun ugu dhaawaceen magaalada Kismaayo nabadoon Ismaaciil Qalinle oo si weyn looga yaqiinay gobolada Koofureed ee Soomaaliya, kaddibna dhaawacaas awgiis uu isla fiidnimadii isla Qamiista ku geeriyooday Isbitaalka Madiina oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa caawa saxaafadda qaabka uu weerarkaas u dhacay uga warbixiyay Axmed Maxamuud...
Wararka ka imaanaya magaalada Ceel-Buur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaas lagu arkay meydka Wiil dhalinyaro ah oo si xun loo dilay. Wiilkan Meydkiida lasoo dhigay gudaha magaalada Ceel-Buur ayaa lasoo sheegayaa in dilkiisa loo adeegsadat midi iyadoona qoorta laga jaray. Dadka deegaanka ayaa sheegay in Meydka Wilkan lasoo dhigay bartamaha Magaalada xalay, iyadoona ay Shabaab soo dhigeen...